ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်တည်ခြင်း - Hello Sayarwon
ကျောက်ကပ်ဆိုတာ ပဲကြီးစေ့ပုံစံရှိတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်ပြီး လူတယောက်မှာ ကျောက်ကပ်၂လုံးစီ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ သွေးထဲမှာပါဝင်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို စစ်ထုတ်ပြီး ဆီးအနေနဲ့ စွန့်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်ဆိုတာကတော့ ကျောက်ကပ်အတွင်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ပေါ်မှာ အရည်များဟာ လုံးဝန်းတဲ့အိတ်ကလေးတွေအနေနဲ့ စုဝေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်လေးမျိုးရှိပြီး အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုးအရည်အိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့တချက်က ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်ဟာ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးခြင်းနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေ ဖြစ်လာတာ ရှားပါတယ်။
သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ် ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်တတ်လဲ
လူဥိးရေရဲ့ ၅%ခန့် အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများမှာ ဖြစ်တာများပြီး ကျောက်ကပ်ပြသနာများရဲ့ ၆၅-၇၀%ထိ ရှိပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ ၂၅-၃၃%ထိ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ပိုသိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်ရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ
ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ သာမန်ကျောက်ကပ် အရည်အိတ်ဟာ လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရည်အိတ်ကြီးလာရင်တော့ ပြသနာရှိနိုင်ပါတယ်။ တွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်တွင်း ဒါမှမဟုတ် ဘေးဘက်ခြမ်း မအီမသာဖြစ်လာခြင်း
သွေးတိုးခြင်း (ဆက်စပ်မှုကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး)
တခါတရံမှာ လက္ခဏာဟာ မပြင်းထန်တာကြောင့် ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်တည်သူများဟာ သူတို့ဘဝတလျှောက်မှာ ဒီပြသနာရှိမှန်းကိုတောင် မသိကြပါဘူး။
သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ် ြဖစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲ
ဒီပြသနာကို အပြည့်အစုံရှင်းပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ သီအိုရီတခုအရ ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်များဟာ ကျော်ကပ်ရဲ့ အားနည်းတဲ့မျက်နှာပြင်မှာ ပေါ်လာပြီး အိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာ အရည်များပြည့်လာပြီး ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်ပုံစံ ကြီးထွားလာပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေလဲ
ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ အချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျား/မ။ အမျိုးသားတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အသက်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အသက်ကြီးလာရင် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
(ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုသိလိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။)
သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်ကို ရောဂါရှာဖွေမှု ဘယ်လိုလုပ်သလဲ
ဆရာဝန်ဟာ ရောဂါရာဇဝင်၊ မိသားစုရာဇဝင် စတာတွေ မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ အာထရာဆောင်း၊ CT၊ MRI စတဲ့ ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပြီး အရည်အိတ်ရဲ့ အရွယ်အစား၊ ပုံစံ၊ သဘောသဘာ၀ စတာတွေကို သိရအောင် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းများ ပြောင်းူလဲခြင်းရှိမရှိ၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိမရှိ သွေးစစ်ခြင်း၊ ဆီးစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အရည်အိတ်ဟာ ဘာပြသနာမှ မပေးဘူးဆိုရင် ကုသမှုခံယူစရာ မလိုပါဘူး။ ဘယ်လိုကုသမှုတွေ လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ အခြေအနေ ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပါတယ်။
သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေမှာ ကျောက်ကပ် အရည်အိတ်ထဲက အရည်များကို ဖောက်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ ပျော်ရည်ထည့်သွင်းပြီး အရည်အိတ်ထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အရည်အိတ်ပြန်ဖြစ်ခြင်း၊ ကြီးမားလွန်းခြင်း စတဲ့နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေ အတွက် အရည်များကို ဖောက်ထုတ်ဖို့ လိုသလို အိတ်ဖြစ်တဲ့ အုပင်နံရံကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် လောင်စားစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက သာမန်ကျောက်ကပ်အရည်အိတ်အတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
အောက်ပါအချက်အလက်တွေက အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကို နှစ်စဉ်စစ်ဆေးပါ။ ကျောက်ကပ်အရည်အိတ် အတော်များများဟာ ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချိန်မှာ တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း။ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ယေဘုယျကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေသလို ကျောက်ကပ်အတွက်လည်း အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
အာဟာရမျှတသော အစားအစာများ စားသုံးပါ။ အဆီနဲ့ သကြားဓါတ်ကဲတဲ့ စားစရာတွေကို လျှော့စားပါ။ အဆီဓါတ်များဟာ သွေးထဲရောက်သွားရင် ကျောက်ကပ်ဟာ သွေးကိုစစ်ထုတ်ဖို့ ခက်ခဲစေပါတယ်။
သိလိုတဲ့အချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print version. Page 288.
Simple kidney cysts. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-cysts/basics/treatment/con-20035205. Accessed July 10, 2016.
Simple kidney cyst. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/kidney-cyst-causes-symptoms-treatments#1. Accessed July 10, 2016.
Simple simple kidney cysts. https://www.kidney.org/atoz/content/simple-kidney-cysts. Accessed July 10, 2016.
Simple kidney cysts. http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/kidney-cysts.html. Accessed July 10, 2016.
Cystic Diseases of the Kidney. http://emedicine.medscape.com/article/453831-overview#a7. Accessed July 16, 2016.
ဆီးအိမ် မှာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေက ဘာတွေလဲ။
ကျောက်ကပ် မှာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါများ